ဖုန်းနံပါတ် ဘယ်လိုအတည်ပြုရမလဲ? – FBS
ဒုတိယ ပါစင်နယ်ဧရိယာ (ဝဘ်)ကို အတည်ပြုမရတာလဲ?
ပါစင်နယ်ဧရိယာ (ဝဘ်) ကို ဘယ်တော့အတည်ပြုမလဲ?
FBS Personal Area (ဝဘ်)တွင် အီးမေးလ်လိပ်စာ ဘယ်လိုအတည်ပြုနိုင်မလဲ?
အီးမေးလ် အတည်ပြုချက်လင့်ခ် မရပါ (ဝဘ်FBS Personal Area)
FBS ပါစင်နယ်ဧရိယာ (ဝဘ်)တွင် SMS ကုဒ်မရရှိသေးပါ
ကျွန်ုပ်၏ ပါစင်နယ်ဧရိယာကို တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် အတည်ပြုလိုပါသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းအတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် အီးမေးလ်အတည်ပြုချက်တွင်ပဲနေကာ၊ သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို အတည်ပြုခြင်းကို ကျော်သွားနိုင်သည်။
သင်သည် ပါစင်နယ်ဧရိယာတွင် နံပါတ်ကိုတွဲလိုပါက၊ သင်၏ပါစင်နယ်ဧရိယာသို့ ဝင်ရောက်ပြီး "အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှု" ဝိဂျက်ရှိ "ဖုန်းအတည်ပြုပါ" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီး၊ "SMS ကုဒ်ပေးပို့ပါ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် ပေးထားသည့်အကွက်တွင် ထည့်သင့်သည့် SMS ကုဒ်တစ်ခုကို လက်ခံရရှိပါမည်။
ဖုန်းအတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများတွေ့ရပါက၊ ပထမဦးစွာ၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင်ထည့်သွင်းထားသောဖုန်းနံပါတ်၏မှန်ကန်မှုကိုစစ်ဆေးပါ။
ဤတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အကြံပြုချက်အချို့ ဖြစ်ပါသည်:
သင့်ဖုန်းနံပါတ်၏အစတွင် "0" ဟုရိုက်ထည့်ရန်မလိုအပ်ပါး
နိုင်ငံကုဒ်ကို ကိုယ်တိုင်ထည့်စရာမလိုပါ။ ဆွဲချသည့်မီနူးတွင် မှန်ကန်သောနိုင်ငံကို ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် စနစ်သည်၎င်းကိုအလိုအလျောက်သတ်မှတ်ပေးလိမ့်မည် (ဖုန်းနံပါတ်အကွက်၏ရှေ့တွင်အလံများနှင့်ပြထားသည်)
ကုဒ်ရောက်ရန် အနည်းဆုံး ၅မိနစ်စောင့်ရပါမည်။
သင်သည် အရာအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်ပြီးသော်လည်း SMS ကုဒ်ကို မရရှိသေးကြောင်း သေချာပါက၊ အခြားဖုန်းနံပါတ်ကို စမ်းသုံးကြည့်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ပြဿနာသည် သင့်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဘက်တွင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကိစ္စအတွက် အကွက်ထဲတွင် အခြားဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို ရိုက်ထည့်ပြီး အတည်ပြုကုဒ်ကို တောင်းဆိုပါ။
ထို့အပြင် သင်သည် အသံဖြင့် အတည်ပြုခြင်း မှတစ်ဆင့် ကုဒ်ကို တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် သင်သည် ကုဒ်တောင်းဆိုမှုမှ ၅မိနစ်ခန့် စောင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး "အတည်ပြုကုဒ်ပါသော အသံခေါ်ဆိုမှုရယူရန် ပြန်ခေါ်ဆိုမှုကို တောင်းဆိုပါ" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ စာမျက်နှာသည် ဒီလိုပုံဖြစ်နေလိမ့်မည်:
သင့်ပရိုဖိုင်ကို အတည်ပြုပြီးမှသာ အသံကုဒ်တစ်ခုတောင်းဆိုနိုင်သည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။